I-Analytical + Creative = Impumelelo Yemidiya Yomphakathi | Martech Zone
NgoMsombuluko, Ephreli 20, 2009 NgeSonto, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Yiziphi izici eziqhuba impumelelo ezinkundleni zokuxhumana? Njengoba siqhubeka nokukhula emsebenzini, sifuna ithalente futhi sidinga ukuxubana okulungile.
Indodana yami ingumfundi weziqu zezibalo… futhi ingumculi. Indodakazi yami ingumculi… futhi iyi-wiz yezibalo. Ngihlaziya kakhulu… kepha ngithanda ukuba nobuciko ekubhaleni nasekuklanyeni kwami. Umculo nakanjani uyisihluthulelo sempumelelo kubo bobabili indodana yami nendodakazi yami. Angiyena umculi, kepha izinto zokuzilibazisa engisebenza kuzo zingisizile ngaphumelela. Ngikholwa ukuthi ukwenza ubuhlakani ngaphandle komsebenzi wakho kuyasiza lapho uhlaziya futhi uxazulula izinkinga emsebenzini wakho - ekugcineni kuholela empumelelweni yakho.
Angizicabangi njengomuntu ongu- uchwepheshe kuSocial Media kepha ngibe nesipiliyoni esanele kuyo ukusiza izinkampani ezinkampanini zemayini nokuzisiza sebenzisa imimoya ethintekayo. Cishe nsuku zonke ngisebenza kokuthunyelwe kubhulogi, izethulo, izinkulumo, ukwakhiwa kwama-imeyili kanye nokwakhiwa kwewebhu. Ngayinye yalezi zitolo zokudala kimi.
Ukube bengizohlela isikhathi sami, kungama-50% wokudala futhi kube ngama-50% amasu / okuhlaziya. Angiqiniseki ukuthi ngingaba njengaye okudala Ezixazululweni engisebenza kuzo namakhasimende kanye nabantu engisebenza nabo uma ngingenalo uhlobo oluthile lokuphuma olwaludinga ukuthi ngizijwayeze nsuku zonke. Ngiyabonga ukuthi ngihlala ngiphonselwa inselelo yokuza nesisombululo sokudala - noma ngabe ukwakhiwa kwesixhumi esibonakalayo somsebenzisi noma amagama kokuthunyelwe okujabulisayo kwebhulogi.
Njengoba ngibheka kubangani bami abaningi ebhizinisini abaphumelelayo, banezindawo ezifanayo zobuciko. Abaningi babo benza kokubili ukuthuthukiswa nokuklanywa kwezithombe. Abanye bangabaculi kanti abanye bangabathwebuli zithombe. Abambalwa kakhulu ngabasubathi… kodwa hhayi abagijimi abalula, bangama-rafters amanzi amhlophe, ama-racing racer noma abagijimi be-marathon. Angikwazi ukucabanga ngobuhlakani obudingekayo ukuze unike amandla umzimba wakho ukudlula kulezo zinselelo.
Ngimangele njalo ukuzwa ukuthi abangane bami benzani ngaphandle kwabo Umsebenzi. Abantu abaningi abahlukanisi phakathi kohlangothi lokudala lomsebenzi wami nokuhlaziya, kepha nakanjani yinto engikwazile ukungena kuyo. Ngiyazi lapho ngisebenzisa izixazululo ezivela ohlotsheni ngalunye lokucabanga ukusiza ukuxazulula okunye futhi kufanele ngikwenze kaningi kakhulu. Kuthatha ukuzijwayeza njalo nokulungisa kahle.
Isikhathi esingu-99%, kokuhlangenwe nakho kwami, ingxenye enzima mayelana nobuciko ayiqhamuki nento okungekho muntu owake wayicabanga phambilini. Ingxenye enzima empeleni yenza into oyicabangile. Seth Godin
Ngingathanda abafundi balokhu okuthunyelwe ukuthi babelane ngohlangothi lwabo lokudala futhi babhale noma babeke amazwana ukuthi kuthinta kanjani ngempumelelo ikhono lokwenza imisebenzi yabo yomsebenzi. Sicela wabelane!
Ama-Super Crunchers ka-Ian Ayres
Ngo-Apr 20, i-2009 ku-11: i-58 PM
Lapho ngiqala umsebenzi wami, ngangichitha izinsuku zami ngibhala futhi ngiqondisa imizamo yokuqondisa ngeposi. Kulukwe kahle kakhulu. Bese kuthi ebusuku, ngibhale izinhlelo zemininingwane egciniwe ukulandelela imiphumela yeposi yamakhasimende ami angenzi nzuzo angakwazi ukukhokhela amaphakheji wokukhulisa imali ngokwezifiso ngaleso sikhathi. Kuboshwe kakhulu kwesobunxele.
Kamuva, lapho ngangingabandakanyeki kangako ohlangothini lwezobuciko lokuphendula ngqo, mina nomkami sabhala ngokubambisana ikhathuni elilodwa lephephandaba eliphuma kanye ngeviki (inguqulo yeMilwaukee yeChicago ethi “The Reader,” ebizwa ngeMilwaukee Weekly). Ngikwenzele konke ukudweba.
Kube mnandi ukubona ukuthi ngizama kangaki ukuhlanganisa zombili lezi zinhlobo zemisebenzi. Yisinye sezizathu esenza ngikwenze engiziphilisa ngakho noma ngabe angikhokhelwanga ngakho.
Siyabonga ngokuletha lesi sihloko esithokozisayo (kimi okungenani!). Ngibheke phambili kulokho okwenziwa abanye ukuklwebha kokubili ukulunywa kokudala nokuhlaziya!
Ngo-Apr 21, i-2009 ku-10: 40 AM
“Ngangenza engikwenzayo ukuze ngiziphilise noma ngabe angikhokhelwanga ngakho.” - kusho konke lokho, Jeff! Ngicabanga ukuthi ngisesimweni esifanayo… yize kuzofanele ngenze okuthile ukukhokha izikweletu. 🙂
Ngo-Apr 21, i-2009 ku-8: 35 AM
Ngingumqambi wemidwebo emini, kepha phakathi nezinyanga zikaJanuwari-Ephreli, ngithatha umsebenzi wesibili ngenza izintela. Njengoba bobabili behluke kakhulu, angikhathali njengobuchopho njengoba ngizoba nomsebenzi wesibili wesikhashana ngenza okuthile okufana nomsebenzi wami wosuku.
Lapho ngidizayina okuthile, ukusebenzisa izinhlangothi zombili zobuchopho bami kungisiza ukuba ngibe ngusizo futhi ngibe nobuciko. Futhi kungenze ngabaluleka ehhovisi, ngiyakwazi ukuphakamisa imibono engasiza ngebhizinisi lethu, kepha kuncane kokujwayelekile ukusinikeza umkhawulo.
Ngo-Apr 21, i-2009 ku-10: 39 AM
Kuyamangaza ngempela - impela ngekhodi lethu lentela, kufanele kuthathe ubuciko obuthile (kepha hhayi kakhulu!)
Ngo-Apr 22, i-2009 ku-9: i-55 PM
Ngisebenza ngobuchwepheshe, kodwa futhi ngingumculi. Ngicabanga ukuthi ukukwazi ukukhipha amandla ami omculo kusiza ukusula ukugxila kwami ​​futhi kungenze ngikwazi ukusebenza kahle.